Faah faahin: dil ka dhacay Muqdisho – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Faah faahin: dil ka dhacay Muqdisho
Faah faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa dabley ku hubeysneed bastoolado oo suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho ku dilay Nin Oday ah.
Dilka ayaa ka dhacay Nawaaxiga Masjidka Shuhadaa ee ku yaalla Cabdalla Shideeye,waxaana la tilmaamay in rag hubeysan oo ahaa dhalinyaro ay toogteen Ninka Oday ah oo xiligaa goobta ku sugnaa,waxaana la sheegay in rasaasta ay uga dhufteen qeybta sare ee jirkiisa,isla markaana uu goobta ku geeriyooday.
Raggii falka dilka ah ka dambeeyay ayaa la sheegay iney goobta ka baxsadeen,waxaana goobta durbadiiba soo gaaray ciidamo katirsan Booliska Soomaaliya,kuwaas oo howlgal aan wax natiijo ah ka soo baxin halkaasi ka sameeyay.
Magaalada Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka dhacayay dilal qorsheysan, waxaana dilalkaasi inta badan sheegta kooxaha Al-shabaab iyo Daacish ee ka dagaalama Soomaaliya.
Previous articleMadaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo Cafis u fidiyay Maxaabiis reer Puntland ah
Next articleWargeyska Daily Nation: Kenya waa inay xoog u adeegsataa muranka xuduudda badda ee Soomaaliya?
Maxaa looga hadlaya Kulanka Golaha Shacabka ?
Spiegel :Somaliland Waa Mucjisada Geeska Afrika”